Richard Ratsimandrava - Pejy fidirana
21 mars 1931 - 11 février 1975
Ny "Fanahy mahaolona " nentim-paharazana , hijoroana amin'ny maha-malagasy, no fenitry ny Kolonely Ratsimandrava hitondrana ny Tany sy ny Fanjakana miorim-paka amin'ny Fokonolona.
Sarobidy taminy ny Fiandrianam-pirenena. Fifanakalozan-kevitra no nihainoany hatrany ny hevitr'ireo natonony sy ireo nanatona azy amim-pifaliana.
Dernières publications (mars 2011)
Fahatsiarovana ny faha-80 nahaterahany
21 marsa 1931 - 21 marsa 2011
Lohahevitra mitondra ny hetsika :
« Diotaona ! Diofanahy ! »
« Fandio taona miandra majihy »
Fiaingana hanadio sy hanajihy fiarahamonina :
« Fandio iray siny tsy mahaleo ny fandoto iray tandroka tsy ny indray mandeha maty vary no handevenan-tsotrobe na ny arivo solafaka no tsy hiarenana fa mila fiarenana ny tena mila fandio ny tany mba ho fananganam-pirenena »
Fandio hoenti-miatrika ny fahantran-tsaina manafotra antsika Fandio hoenti-manasina indray ny tontolo novetaina
Lire la suite : Evènements
© 2022 Richard Ratsimandrava